Mommra mma yɛnto dwom wɔ anigye so mma Awurade;
momma yɛmmɔ ose mma yɛn nkwagye Botan no.
Momma yɛmfa aseda mmra nʼanim,
na yɛmfa ahosɛpɛw nnwom mma no so.
Efisɛ Awurade yɛ Onyankopɔn kɛse,
ɔhenkɛse wɔ anyame nyinaa so.
Ne nsam na asase mu nneɛma nyinaa wɔ,
na mmepɔw mpampam wɔ no.
Po wɔ no, ɔno na ɔbɔe,
na ne nsa na ɛnwenee asase kesee no.
Mommra, mma yɛnkotow nsom no.
Momma yemmu nkotodwe wɔ Awurade yɛn Yɛfo no anim!
Ɔyɛ yɛn Nyankopɔn;
yɛyɛ ne didibea nnipa,
ne nguankuw a ɔhwɛ wɔn so.
Nnɛ, sɛ mote ne nne a,